निर्मला हत्यालाई रुखबाट एउटा पात झरेको नभनिदिनु « Postpati – News For All
निर्मला हत्यालाई रुखबाट एउटा पात झरेको नभनिदिनु
तीब्र गतिको रेल ढिलै आए पनि हुन्छ। पानीजहाज अझ ढिलो आए पनि देश बिग्रन्न। शक्तिशाली आणविक भट्टीका सपना पनि चाहिएन। बिजुली भोली बेचे पनि हुन्छ। हिउँ छउन्जेल सगरमाथाको पानी बेच्न पनि हतारो नगर्दा हुन्छ। न्याय र सुरक्षा मारेर चाहिएन तिम्रा वायुपंखी समाजवादको उडान। विश्वास र भरोसा नभएको समृद्धिको जेट ठोक्कियोस् घोप्टेभीरमा।
पहिला निर्मलाको आत्मालाई शान्ति देऊ। निर्मलाको सही हत्यारालाई दण्ड देऊ। बलत्कार र हत्यालाइ ढाकछोप गर्ने र कारबाहीमा ढिलासुस्ती गर्नेहरुमाथि पनि दण्डको व्यवस्था गर ।
जसरी बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्थ्यौ, त्यसरी नै न्याय नै मारेर समृद्धि आउँदैन, आए पनि अर्थहीन हुन्छ। भय र त्रासयुक्त राज्य चलाएर राजनेता ठान्नेहरु घृणायोग्य छन् र
प्रहरीलाई जनताका साथी बनाऊ न्यायको शत्रु होइन। अपराधी लुकाएर, जोगाएर, भगाएर रामराज्य दिन्छौं नभन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली ! निर्मला हत्यालाई रुखबाट एउटा पात झरेको नभनिदिनु…मेरो देशको सरकार अपराधीको कठपुतली हो भनेर लगाएको आरोपले मलाई त पोल्छ तपाइलाई पोल्दैन ?
देशका हरेक छोरीचेलीले हरेक पुरुषको अनुहारमा बलत्कारीको छायाँ देख्नु अगाडि एकपटक ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्न सविनय अनुरोध सहित ।
देशको आधा आकाश कालो छ। हिंसाको त्रासले त्रस्त छ। अपराधको बादलले छपक्कै छोपेको छ। हामी एउटै आकाशमुनी छौं निर्मलाको रोदन र चित्कार घोलिएको पन्त परिवारको आँशुले मेरो गह भिजाउँदा तपाइको पनि मुटुको धडकन बढ्दो हो है कि बढ्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू।
तपाई अरिंगालको गोलो बन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै हुनुहुन्छ म निमोठिएको एउटा फूलको आत्मामाथि न्याय गर भन्दैछु। ममाथि अरिंगालको गोलो बर्साउन आदेश दिंदा तपाई दण्ड र न्यायको बिसंगत आवरणले छोपिनुभएको हो कि भन्ने सन्देह भो। एउटा दैत्यले निर्मलाको अस्तित्व नामेट पार्दैगर्दा त्यसले तपाइको सत्तामा कोहराम मच्चाउनेबारे सोचेको थिएन होला, ऊ त राक्षसी तुष्टी लिंदै थियो। त्यसैले तपाई र तपाईका समकक्षी अध्यक्षको भनाई यहाँ जँच्दैन। मलाई आशा छ लोकले त्यतिबेलासम्म तपाईको जय गाउँदैन जबसम्म तपाईले यही हो निर्मलाको हत्यारा भनेर लोकलाई देखाउनुहुन्न। त्यतिबेलासम्म म पनि तपाइको सत्ताको शत्रु हुन मञ्जुर छ। तपाईको शान शौकत र ऐसआरामको जिन्दगीमा निर्मला प्रकरणको कालो दाग नपोतियोस्। मेरो देशको नायक श्रापित भएर हिंडिरहँदा मलाई त ग्लानी हुन्छ तपाई त त्यही नायक…। आगे तपाईकै मर्जी